EZONA 10 ZIPHOLILEYO ZOKUCOFA - IZIXHOBO
Eziphezulu ze-19 eziBalaseleyo zeBoxer zaMadoda-Ezingaphantsi zangaphantsi zeklasi
I-31 ye-Kobe Bryant yeTattoo yeengcinga- [Isikhokelo sika-2021 sokuphefumlela]
I-30 ePhakamileyo yokuPhela kweenwele zaMadoda-Ukusikwa ngaphezulu kwaKhe
Ezona 10 zipholileyo zokuCofa
Kukho ityala ekufuneka lenziwe ukuba ukupakisha kohambo lwenkampu lelona candelo lilungileyo lenkampu. Ufumana ukogqitha kwigaraji. Fumana zonke izixhobo zakho ozithandayo. Pakisha izinto ezipholileyo ezigcwele izinto ezintle. Ukukhumbuza malunga neendlela zokuhamba ngeenkampu ezidlulileyo.
Bambelela, masibuyele kuloo kupholileyo umzuzwana. Kudala ndinawe. Kufana nomhlobo wakudala. Kodwa uyazi into enye ngaphandle kwamathandabuzo: nokuba upakisha kangakanani umkhenkce kuloo nto, iziselo zakho kunye neebhotile zetychup ziya kudada emanzini adikidiki ngexesha ufika kwinkampu.
Kungalixesha lokuba uyeke oku kupholileyo okudala okuthembekileyo, kwaye uphucule kwinto entsha kunye nengcono. Ngethamsanqa, siye salungisa ezinye zezona zipholileyo kwiimarike kulo nyaka, kwaye sinezindululo ezintle.
1. Ummandla weArctic Zone Titan Deep Freeze
Ngawo nawuphi na umlinganiselo umntu anokugweba ngawo opholileyo, uMmandla weArctic iTitan Deep Freeze sisixhobo esikhulu. Inzima, inzima, kwaye igcina umkhenkce kangangeentsuku ezine okanye nangaphezulu.
Kunzima ukucinga ukuphola okungcono kukhenketho lwenkampu kunye nokuzonwabisa kwangaphandle. Ukujiya kwe-polyurethane eshinyeneyo kugcina izinto zipholile ixesha elide, kwaye imveliso eyakhelweyo ngaphakathi yeMicroban inikezela ukhuselo ngokuchasene nevumba kunye neebhaktiriya.
Enye yezinto ezintle malunga neTitan kukuba yirhabaxa ngokwaneleyo ukumelana nazo zonke iintlobo zeemeko. Ngolwakhiwo olungenamthungo, ii-T-latches ezikhuselekileyo, kunye negasket yerabha ye-360-degree, epholileyo ibamba ukufuma kunye nokubanda ngaphakathi.
I-Titan Deep Freeze ikwadibana ne-Interagency Grizzly Bear yemigangatho yeekhonteyina enganyangekiyo (xa isetyenziswa ngezitshixo ezifanelekileyo, ezithengiswa zodwa). Ukuba le nto ipholileyo inecala elisezantsi, bubunzima bayo, kodwa iiponti ezimbalwa ezongezelelweyo lixabiso elincinci lokuhlawula eli nqanaba lokuqina.
2. I-Yeti Tundra Haul Hard Cooler
I-YETI inegama elifanelweyo ngokwenza ezinye zezona zipholileyo zinzima kwintengiso. I-Tundra Haul Hard Cooler yeyona nto ipholileyo enamavili ebhrendi, kwaye ngumdibaniso obalaseleyo wendlela elula yokuqina kunye nokuqina kwembali ye-YETI.
Kodwa ke, oku kupholileyo kuninzi ekunokukunika ngaphandle kokuphatheka kwaye kuphantse kungonakali. I-Tundra Haul ineendonga ezingqindilili ezizaliswe ligwebu loshicilelo lwenkohliso lokugcina umkhenkce ubuninzi, kunye nebhasikithi yegreyidi efriji ejikeleze sonke isiciko sokutywina kubanda.
Le nto inzima kakhulu, nangona. Xa i-YETI ipakishwe igcwele, ukuyiphakamisela ebhedini yelori ngumsebenzi wabantu ababini. Kodwa ukuba uyikhathalela kakuhle, uya kuyisebenzisa epholileyo amashumi eminyaka.
I-Tundra Haul inelinye lawona maxesha okugcina umkhenkce kwiindawo zentengiso - ukuya kuthi ga kwiintsuku ezisibhozo- kwaye ungayibeka kwelitye kwaye iya kuqhubeka nokuqengqeleka.
3. I-Coleman 60 Quart Performance Wheel Cooler
iitattoo zangaphakathi ezincinci zabafana
Ukuba uye wamisa inkampu xa wawusengumntwana, kunokwenzeka ukuba ubenoColeman opholileyo xa ukhwela. I-Coleman gear camping iyinxalenye ye-DNA yethu, kwaye uyazi ntoni? Basenza ezinye izinto ezipholileyo, ezinobuhlobo-mali ezipholileyo.
Zonke ezi zinto zingasentla zenza ukuba iColeman 60 Quart Performance Wheel Cooler ibe mnandi, kongeze nakuphi na uhambo lwenkampu okanye ipikniki. Okupholileyo kunamavili erhabaxa-kunye-nokuwa ukuze ufike apho ufuna khona, kunye nesiphatho esisebenzisekayo seteleskopu ukukunceda ukuba ufike apho.
UColeman wenza umsebenzi olungileyo wokugcina izinto zibanda, kunye nokugcina umkhenkce iintsuku ezine. Ayisiyonto epholileyo eya kuhlala ixesha elide, kodwa liqabane eliqinileyo lenkampu ngokuqinisekileyo ukukunika iminyaka eliqela yenkonzo ethembekileyo.
Ibanzi ngokwaneleyo ukuba ibambe iitoti ezingama-94 (kunye nezine eziphethe ikomityi ebunjiweyo kwisiciko, iColeman 60 Quart Performance Wheel Cooler lukhetho olukhulu kunxaniwe, inkampu eyazi uhlahlo-lwabiwo mali.
4. Igloo Ngokukhawuleza kwaye upholile
I-Igloo ekhawulezayo nepholileyo inoyilo oludala kunye nokubanakho ukugcina umkhenkce ukuya kwiintsuku ezisixhenxe. Yintoni enye oyifunayo? Ewe okoko ubuzile, ikwanayo ne-UV inhibitors kwisiciko ukukhusela ukonakaliswa lilanga, kunye ne-latch-fit latches ukukhusela isiciko.
Ngomthamo weekota ezili-150, le yindawo ebanzi epholileyo. Oko kuyenza ilungele uhambo lwenkampu yosapho xa kukho imilomo emininzi yokondla. Ukuba oku kupholayo kunekhonkco elibuthathaka, ziihenjisi eziguqukayo zeplastiki. Banxiba ngokulula, kodwa kwicala lokudibanisa, kulula ukubabuyisela.
Iplagi yedreyini enomsonto enokudibanisa nethumbu sisongezo esiluncedo esenza ukuba kube lula ukukhupha nokucoca i-Igloo. Ikwanayo nebala ngaphakathi kunye nevumba elinganyangekiyo lining ngaphakathi ukuyinceda ihlale ihlaziyekile kuhambo olude lweenkampu.
5. I-Seavilis Milee-Heavy Duty Ukupholisa iivili
Esinye sezinto ezipholileyo ezinamavili aphezulu esizibonileyo kutsha nje, iSeavilis Milee-Heavy Duty Wheel Cooler sisixhobo esomeleleyo, esikhuselekileyo esiza kuhamba naphi na apho indlela ikusa khona.
Ngoyilo lwe-no-frills kunye nolwakhiwo olungenakonakala, i-Heavy Duty Wheel Cooler yakhelwe ukugcina ukutya neziselo zakho kubanda nakweyiphi na imeko. Yakhelwe ngaphakathi kwiibhotile ezivulekileyo, igasket yesitayile sefriji, iplagi yedreyini engenakuvuza, kunye nezibambo zenayiloni ezikwinqanaba lomkhosi.
Amavili asi-7 omelele kwaye aphatha iindawo ezahlukeneyo ngokulula. Okupholileyo kuza nezinto ezinjengebhasikidi yocingo kunye nokwahlulahlula iplastiki, nto leyo intle ngakumbi kuba uninzi lweenkampani ezipholileyo zilindele ukuba ubhatale imali engaphezulu kwezo ntlobo zezixhobo.
6. Ifriji yeKalamera ephathekayo
Ngaba uyondliwa ngokukurhabaxa? Ukuphazamisa umgca phakathi kwefriji kunye nokupholisa, i-Kalamera Portable Refrigerator yinto ekhethekileyo kunoma ubani oye wahamba ngokwaneleyo ukuba ahambe ngokuthenga iingxowa zeqhwa kanye kunye.
Le friji iphathekayo i-12V inokufaka iplagi kuyo nayiphi na indawo ephuma eludongeni okanye ilayita yesithuthi sakho. Ibaleka phantse ithe cwaka kwaye icwecwe ngokwaneleyo ukuba ingene esiqwini okanye ngasemva kwesihlalo esingaphambili seemoto ezininzi.
Nangona isebenza njengefriji, iKalamera ivula ukusuka phezulu njengepholile. Inomthamo we-54-quart kunye ne-thermostat yedijithali kwaye yenza umsebenzi omkhulu ukugcina iziselo kunye nokutya okulula okubandayo kubanda kwiimoto ezinde kunye nohambo lwenkampu.
7. I-RTIC Hard Coided Cooler
I-RTIC yenza ezinye zezona zinto zipholileyo ezomeleleyo, ezomeleleyo, ezirhabaxa, nezirhabaxa nezikulungeleyo ukudibana nazo. Kumnandi ukwazi ukuba isandwich yakho ingaphakathi kwinto onokuthi uyibuyise iloli yakho ngaphandle kokushiya ekuqaleni.
Enye i-perk ye-RTIC Hard Sided Cooler kukuba igcina umkhenkce ukuya kwiintsuku ezili-10, malunga nokuba ngubani na olindelekileyo ukuba apholile. Ineziphatho zentambo ezinokuhlengahlengiswa, iindawo zokubopha ezibunjiweyo, isitayile sefriji, kunye nenkqubo yokutshixa ngokudibeneyo.
I-RTC Hard Sided Cooler iyintandokazi yabazingeli kunye nabalobi, kodwa liqabane elihle kulo naluphi na uhambo lwenkampu. Ifumaneka ngobukhulu obuhlanu ukusuka kwi-20 ukuya kwi-145 yeekota, le nto ipholileyo ayinyamezeleki kwaye malunga nobungqina bebhombu.
8. I-RoVR eqengqelekayo epholileyo
oza kunxiba ntoni ngeebhulukhwe ze-burgundy
I-RovR Wheel Camping Rolling Cooler iyaguquguquka, iyasebenza, kwaye ihlala ixesha elide njengoko ifumana. Ngobungakanani beekota ezingama-60 kunye nobunzulu obomileyo obususwayo obomileyo, ifanelwe yindawo kuyo nayiphi na inkampu, ukuloba, okanye uhambo lokuhamba ngesikhephe.
Uyilo lomzimba oluphakamileyo lweRovR luyinto entsha kwaye luyanceda ukugcina imixholo yalokubanda ixesha elide. Ipholile ikwanayo negasket engangeni moya kunye neendonga ezingqindilili ezigcwele ukufakwa kwe-foam ephezulu kakhulu ukugcina umkhenkce kangangeentsuku ezisixhenxe ukuya kwezili-10.
Ngomgqomo wokugcina okhoyo oguqula okupholileyo ube yinqwelo yeendawo zonke zokutsala iirhasi, iRovR igqibelele kubakhampasi abahambahambayo. Amavili erabha anganyangekiyo e-intshi ezi-9 anceda ukukufumana kunye nesidlo sasemini naphi na apho ufuna ukuya khona.
9. I-Pelican Elite Inamavili apholileyo
I-Pelican Elite Wheel Cooler yenzelwe ukusetyenziswa kobunzima. Iqinisekisiwe ukumelana nebhere yi-Interagency Grizzly Bear Committee, yenziwa e-USA, kwaye iqinisekisiwe ngobomi.
Oku kupholile kakhulu ukugcina iziselo zakho zibanda kwaye ukutya kwakho kutsha. Uluhlu lwe-2-intshi yokufakwa kwe-polyurethane ikunika ubomi obuninzi ngaphandle komkhenkce-ukuya kwiintsuku ezili-10 kuxhomekeke kwiimeko. Igasket efrijini-ekwinqanaba nayo iyanceda.
Umlawuli odityanisiweyo kwisiciko wenza oku kupholile okugqibeleleyo ukuba ahambe nako kuhambo lokuloba, kwaye ukuvula ibhotile eyakhelweyo kulungele ukubuyisa umva kubanda ukubhiyozela ukubamba kwakho. I-Pelican Elite Wheel Cooler iza ngobukhulu obuyi-25-quart kunye ne-80-quart) kunye nemibala emithathu (emhlophe, amalahle kunye ne-tan).
10. I-Orca 40 epholileyo
I-Orca 40 epholileyo lukhetho olukhulu lokuhamba ngenkampu olufutshane kuzo zonke iimeko. Ngobunzima beekota ezingama-40 kwaye ubukho kwimnyama yomnyama, le inokuba kuphela kwento epholileyo oyifunayo.
Unokulindela ngokulula ukuba umkhenkce uhlale iveki okanye nangaphezulu ngaphakathi kwe-Orca 40. Yakhiwe kakuhle, ngolwakhiwo lwe-roto-molded kunye ne-insulation edibeneyo. Le nto ipholileyo yenziwa ukuba ikhutshwe ngephenyane kwilanga eligqats 'ubhobhoyi, kwaye iyakugcina ukubamba kwakho kutsha nokuba kunjani.
Njengokupholisa okuninzi okunikezela ngolu hlobo lwamandla okupholisa kwinqanaba elilandelayo kunye nokuqina, i-Orca incinci kwicala elinzima. Inobunzima malunga neepawundi ezingama-30 zingenanto, kodwa igcina izinto ezibandayo zibanda njengentsimbi.
Imibuzo ebandayo ye-FAQs
Nguwuphi umahluko phakathi kweicooler ezilukhuni kunye nezithambileyo?
Ngaphandle kokucacileyo - iicooler ezinzima zinokwakhiwa okuqinileyo ngelixa ezipholileyo zithambile - kukho umahluko omkhulu phakathi kwezi ntlobo zimbini zokupholisa, zombini ngokomthamo kunye nokukwazi ukugcina izinto zipholile.
Iicooler ezithambileyo ngokubanzi zenzelwe ukusetyenziswa kwexesha elifutshane. Uphosa iziselo ezimbalwa kwelinye kwaye uziphathe ngaphezulu kwegxalaba elinye. Iicooler ezilukhuni zenziwe ukuba zibambe ngakumbi kwaye zihlale zibanda ixesha elide, zisenza ukuba zilungele uhambo lwenkampu.
Ziziphi iimpawu omele uzijonge kwindawo epholileyo yenkampu?
Xa ukhetha ukupholisa uhambo lwenkampu, uninzi lwezinto eziphambili ekufuneka ziqwalaselwe kukuzinza kunye namandla. Kuhlala ixesha elingakanani ufuna ukuba kupholile ukuba kuxhomekeke kwimeko oceba ukuyithobela kuyo, kwaye amandla afanelekileyo axhomekeke kubude bohambo lwakho, kwaye bangaphi abantu abaya.
I-40-quart cooler epholileyo ihlala ilungele abantu abathathu kuhambo losuku. Kohambo lwekampu yeempelaveki, inani elifanayo labantu kufuneka liqwalasele ukuphola kuluhlu lweekota ezingama-60.
Uchitha malini kupholile?
Unokufumana ukuphola okuphucukileyo nge- $ 100 okanye ngaphantsi, kodwa njengezinto ezininzi, uhlala ufumana oko ukuhlawulayo. Iicooler eziqhubele phambili ezakhiwe ngokuzinzileyo kwaye zigqunywe kakuhle ukugcina umxholo wazo ubanda ixesha elide, zihlala zibiza ngaphezulu.
Ekugqibeleni, ukhetho luxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Kodwa ukuphola okukhulu kunokuhlala ebomini.
IZIGEN Ukuthambisa ubuso ijel-eNtsha kuyo yonke into yokufuma enye
I-30 yokuwa yoyilo lweTatto yamadoda -Izimvo ze-Ink ezantsi
Eyona Tatoo yoMkhono yokuGqibela eyi-137 + ngo-2021
Ukudibanisa ngaphezulu kweenwele zamadoda -Izitayile ezingama-40 zaMadoda eziDala
I-70 IiTattoos ezibalaseleyo zaMadoda -Iimbono zoYilo eziMangalisayo
60 Ukudalwa kuka-Adam Iitattoo Uyilo lwaMadoda-Izimvo zoPeyinti zikaMichelangelo
Uyilo lwepatio kuhlahlo-lwabiwo mali
Uyilo lwendawo yokuhlala yomlilo
Umthandazo wezandla iiTattoo engalweni
ingakanani imvambo yesiqingatha semikhono
Iigiya zemfazwe tattoo izimvo
Umvambo webhabhathane egxalabeni elingaphambili